Fil d'actualités du 04/06/2020
04/06/2020 - 17:00 : AFERA BONBONS SUCETTES: Nesorina tamin'ny toerany androany ny Minisitry ny fanabeazam-pirenena Rijasoa Andriamanana Josoa noho ilay raharaha mahasaringotra azy dia ilay afera 8,4 miliara malaza ho nividianana "bonbons sucettes". Ny minisitry ny fampianarana ambony no miandraikitra vonjimaika ny toerany.
30/05/2020 - 13:30 : CORONAVIRUS: Niampy iray ny maty nampiakatra ny isa ho 6 eto amintsika. 60 kosa ny tranga androany.
29/05/2020 - 17:00 : RAHARAHA BONBONS SUCETTES: Tsy mbola navoaka tao amin’ny kitapom-bolam-panjakana ilay vola 8 miliara ariary. Tsy mpangalatra na mpanao ny tsy mety izahay, olon’ny asa aho ary tany amin’ny tany misy dolara no nody aty amin’ny tany mandray Ariary, hoy ny Minisitry ny Fanabeazana Rijasoa Andriamanana.
29/05/2020 - 16:30 : AMBOLOKANDRINA; Lehilahy anankiroa, 27 sy 43 taona no amoy ny ainy nianjeran'ny tany ny maraina teo. Ora maro no nikarohana ny razana.
29/05/2020 - 14:30 : CORONAVIRUS: 42 ny tranga vaovao notaterina androany. Tafiakatra 698 ny voa rehetra hatramin'izay. 529 mbola tsaboina, ka ny 9 ahiana mafy ny ainy.
29/05/2020 - 14:00 : CORONAVIRUS-VAOVAO LEHIBE: Olona 3 no namoy ny ainy tao Toamasina omaly, ka nampiakatra ny isa ho 5 hatramin'izay nidiran'ny covid-19 teto Madagasikara, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta.
19/05/2020 - 13:25 : COVID-19: Olona 4 vaovao indray no notaterina fa voa androany, ka 2 tany Toamasina, ary 2 teto Antananarivo. 326 ny fitambaran'ny voa hatramin'izay. Nihatsara ilay "forme grave" iray teny Anosiala, ary efa tsy ampiasana "oxygène" intsony.
19/05/2020 - 13:15 : COVID-19: Nohamafisin'ny CCO Covid-19 tamin'ny alalan'ny Pr Vololontiana Hanta ny fahafatesan'ilay Filipianina tao Ambatovy. Tsy notsaboina tamin'ny alalan'ny CVO izy io, hoy ity Profesora ity.
18/05/2020 - 23:00 : VAOVAO LEHIBE-CORONAVIRUS: Teratany Filipianina iray antsoina hoe Ryan Reyes namoy ny ainy tany Ambatovy androany 18 may. Ny taona 2012 izy no nanomboka niasa tao.
17/05/2020 - 12:40 : VAOVAO LEHIBE-CORONAVIRUS: Olona iray 57 taona tao Toamasina no namoy ny ainy vokatry ny coronavirus. Iray tamin'ireo tena natahorana na "formes graves" izy ary nisy tosidrà sady voan'ny diabeta.
Archive du 20190621
Fanagadrana ny namany 25 isa Mikomy ireo Kômandôn’ny RFI Ivato ?
Mikasa ny hikomy ireo miaramila mpanao vy very ny ainy (commando) eo anivon’ny toby RFI etsy Ivato, raha ny loharanom-baovao azo. Andrasana anefa izay tena hiseho.
Fanjakana Malagasy Hividy fitaovam-piadiana raitra…
Tonga nitsidika ny andiany faha-53 amin’ny hetsika iraisam-pirenen’ny fiaramanidina sy ny tontolony fanao any Bourget Paris na « Salon du Bourget 2019 »
Distrikan’i Ihosy Velon-taraina amin’ny hala-bato i René Fulgence
Velon-taraina ny kandida ho depioten’i Ihosy, René Fulgence, manoloana ny hala-bato nitranga tao an-toerana na dia nametraka fitarainana tamin’ny HCC aza, raha ny nambarany omaly.
Fampidinana vidin-tsolika Esoin’ireo mpanao politika
Misaotra ny filoham-pirenena, hoy ny filohan’ny antoko politika Kintana, Tabera Randriamanantsoa, nandany 3 andro niady hevitra hampidina ny solika.
Taratasin’i Jean Ra zato !
Dia ahoana Ra zato aaa ! Oadray ! Ra Jean mantsy e ! Azafady indrindra re fa tena donto be an’ilay famakafakan’ilay sakaizanao tao amin’ny onjampeo omaly iny aho a !
Lalàna sy zo fototra maha olombelona Fanoitra amin’ny fampandrosoana
“Voararan’ny lalàna ny manala baraka olona sy miteniteny foana, fa endrika tsy fanajana ny zo fototra maha olombelona”, hoy Razanatahina Florence,
Zanak’Ifanadiana V7V Mitaraina amin’ny Tsindrihazolena nahazo azy ireo
Solontena roa, ny printsy Ralaizandry Honore Alexandre sy Randrianasoloniaina Jocelyn,
Fahatongavan’i Papa François Mitondra ny anjara birikiny ihany koa ny CUA
Nidina ifotony hijery ny toerana lehibe handraisana an’ny Papa Ray Masina eny Soamandrakizay Androhibe ny Kaominina omaly tolakandro.
Noraisina tamin’ny fomba ofisialy amin’ny maha mpifaninana amin’ny amboaran’i Afrika azy tao Ejipta omaly ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra na Barean’i Madagasikara.
CAF tarihin’i Ahmad Hanaovan’ny FIFA fanadihadiana lalina
Namoaka fampitam-baovao iraisana ny Kaonfederasionina Afrikanina momba ny baolina kitra (CAF) ny Federasionina Iraisam-pirenena (FIFA) fa hisy ny fitsirihana lalina na “audit”
CAN 2019 Tonga ilay nandrasana
Tonga ilay fotoana nandrasana « Jour J », hoy ny fiteny Frantsay, hanombohan’ny fifaninanana avo lenta aty Afrika dia ny CAN 2019 « Afrique des nations 2019 »
Manabado vahoaka hatrany
Hafa ny resaka sy ny serasera mipoapoaka ary hafa ny asa sy fikaroham-bahaolana ho an’ny firenena.
Taksibe sy fiarakaretsaka
Mihena 1.000 Ar isaky ny litatra ny solika vao mety hidina ny saran-dalana
Sekoly ambony CNTEMAD Hiroso amin’ny fanofanana arak’asa ny mpianatra koa
Mpianatry ny oniversitem-panjakana CNTEMAD miisa 16.800 no miatrika fanadinana, hifarana anio.
Tambohobe 2019 Hotohizana ny fanatanjahantena sy kolontsaina
17 taona aty aorian’ny nitsanganany, nahazo filoha vaovao ny fikambanana Tambohobe “TAnora MBOla HOBEazina”
Asa fampirohorona any MALI Maro no mifindra monina…
Efa sesilany ny fanafihana ataon` ireo vondrona djihadiste any Mali. Mihorohoro ny firenena satria tafiakatra 41 ireo olona namoy ny ainy, raha ny tatitra navoakan` ny Firenena Mikambana omaly maraina.
Mpifindra monina Ireo tany miady no tena ahitana izany
Tombanana any amin’ny 75 tapitrisa ny isan’ny olona nifindra monina na nitsoa-ponenana manerantany, nandritra iny taona 2018,
Thailande Mpamboly iray maty notrongisin’ny Elefanta
Teratany thailandey iray no maty notrongisin’ny elefanta tao amin'ny valan-javaboahary nasionaly iray tany atsinanan'ny firenena.
MINFOP – CNaPS tany Moramanga Tsy maintsy ampidirina CNaPS ny mpiasa Malagasy
Mbola maro ny fisalasalana sy ahiahy manodidina ny fidirana ho mpikambana amin’ny fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara.
Fetim-pirenena 26 jona Manomana tolotra vaovao ny BNI
Kely sisa dia hianoka tanteraka ao anatin’ny fankalazana ny fetim-pirenena 26 jona isika.
Ady amin’ny fiparitahan’ny diky Nahazo toeram-pivoahana sy fidiovana ny fokontany Andraisoro
Mbola betsaka ireo olona tsy manana toeram-pivoahana sy fidiovana eto amintsika. Voakasik’izany manokana ny eny amin’ny faritra iva izay ny 30 % monja no manana.
Fitantanana ny harena ankibon’ny tany Hanao tatitra amin’ny ITIE isan-taona i Madagasikara
Nandray anjara tamin’ny fikaonan-doha iraisam-pirenen’ny Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE 2019)
Vidin-tsolika Afaka mihena hatrany amin’ny 198 Ar
Mbola hilatsaka hatrany io vidin-tsolika io raha ny tokony ho izy, hoy ny mpahay toekarena Rado Ratobisaona nandritra ny tatitra fahatelo mahakasika ny maridrefin’ny Indostria nataon’ny
Famatsiana herinaratra amin’ny herin’ny masoandro Ezaka maro no hotanterahina
Maro ireo dingana maro tokony hotanterahina amin’ny fampiroboroboana ny orinasa JIRAMA.
International Fair Tourism Madagascar 60 mahery ireo tsara vintana tamin’ny lalao
Nizara ny lokan’ireo tsara vintana tamin’ny lalao Tombola tamin’ny ilay fampirantiana ara-pizahantany ITM 2019 izay nokarakaraina tetsy amin’ny CCI Ivato ny Ofisy Nasionalin’ny Fizahantany (ONTM) sy ireo mpiara-miombon’antoka.
Orinasa tsy manaja fifaninanana eto Madagasikara Tsy mbola manana tarehimarika ny mpanadihady
Niditra tamin’ny andro faharoa omaly ny fankalazana ny andron’ny fifaninanana eto Madagasikara notontosaina tetsy amin’ny Pave Antaninarenina.
Fanaterana fitaovam-piadiana tsy misy arakaraka Basy 21 sy bala 68 no naterin’ny dahalo avy ao Isandra
Omaly alakamisy 20 jona no nifarana ny fanaterana basy tsy misy arakaraka ho an’ireo izay mitazona izany tsy ara-dalàna,
Lozam-pifamoivoizana teny Ankazobe Mpianatry ny LTP Ankazondandy 1 maty, 11 naratra
Mpianatra 1 no maty ary mpandeha 11 avy tao amin’ny lycée technique professionnel na LTP Ankazondandy no niharan'ny lozam-pifamoivoizana afaka an’Ankazobe.
Afera varotra merkiora Any am-ponja ilay mpisoloky 250 tapitrisa Ar hanaovana sorona
Naiditra am-ponja vonjimaika afak’omaly ny vehivavy iray nisoloky 250 tapitrisa ariary mahery nisandohany hamoahana merkiora,
Raharaha nahafaty an’i Ny Avo Ambohibao Ramatoa 65 taona no voarohirohy nahavanon-doza
Tohin'ilay fahaverezan-jaza iray tao Morondava, Ambohibao kaominina Antehiroka ka efa vatana mangatsiaka vao hita dia voasambotry ny zandary avy ao amin'ny